१४ औं साग आयोजनाको जिम्मेवारी सशर्त पाकिस्तानलाई ! | Hamro Khelkud
१४ औं साग आयोजनाको जिम्मेवारी सशर्त पाकिस्तानलाई !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १४ औं सस्करणको आयोजना सशर्त पाकिस्तानलाई दिइएको छ । दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल (एसएओसी) को शनिबार राजधानीमा बसेको बैठकले पाकिस्तानलाई सन् २०२१ मा साग आयोजनाको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
एसएओसीको बैठकको अध्यक्षता गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अंग्रेजी वर्णानुक्रमका आधारमा पाकिस्ताननले अर्को संस्करण आयोजनाको जिम्मेवारी पाउने बताए । एसएओसीको विधानको व्यवस्था त्यस्तो भएपनि पाकिस्तानले साग गर्न नसक्ने वा नगर्ने अवस्थामा श्रीलंका र माल्दिभ्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
अबको छ महिना भित्र पाकिस्तानले साग आयोजनाका लागि आश्वस्त पार्न सकेको खण्डमा पाकिस्तानले नै जिम्मेवारी पाउनेछ । यदि पाकिस्तानमा हुने अवस्था नभए र गर्न तयार नभए श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई १४ औं साग आयोजनाको जिम्मेवारी दिइने श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसअघि पाकिस्तानले चौथो र नवौं संस्करण आयोजना गरेको थियो । अहिले सम्म माल्दिभ्स र भुटानले साग आयोजना गरेका छैनन् ।
अर्को महिना नेपालमा आयोजना हुने १३ औं सागको तयारीको अवस्था जानकारी दिन आयोजित एसएओसीको बैठकमा अर्को संस्करण आयोजकको छलफल भएको थियो । भौतिक पूर्वधारको निर्माण सम्पन्न भइनसके पनि नेपालले तोकिएको मिति मंसिर १५ देखि २४ गतेका लागि तय १३ औं साग गराइन छाड्ने प्रतिबद्धता एसएओसीका प्रतिनिधि सामू गरेको थियो ।